ရထားဖြင့်သြစတြီးယားနှင့်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်သွားရောက်စေရန်လှပသောမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်သြစတြီးယားနှင့်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်သွားရောက်စေရန်လှပသောမြို့ကြီးများ
ဤမျှလောက်များစွာသောမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ, တူသောခေတ်စားလာနိုင်ငံများ ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, နှင့် ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယားအများကြီးအာရုံစိုက်မှုအဖြစ်လာပြီရသေးအံ့ဩစရာမရှိ! ရလား, အီတလီနိုင်ငံကယ့်ကိုမြေပုံကျွတ်လေ၏ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့် မီးရထားလမ်းကြောင်း သြစတြီးယားကနေအီတလီကိုသေချာလျစ်လျူရှုထားပြီး. ဒါပေမဲ့, ပြောင်းဖို့အကြောင်းကိုဖွင့်! ရထားလမ်းအားဖြင့်သြစတြီးယားနဲ့အီတလီအရှိဆုံး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများ သငျသညျအစဉျအမွဲသကျသခေံရလိမ့်မယ်.
သူတို့ရဲ့ quaint သောတောင်ပေါ်ကျေးရွာများနှင့်အတူ, သဘာဝအလျောက်စိတ်ကိုဖမ်းစား ဆွဲဆောင်မှု နှင့်ညားမြို့ဗိသုကာ, သငျသညျအံ့သြဖွယ်ရလိမ့်မယ် ဥရောပခရီးစဉ်. Trains in Austria are among ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်, ညဥ့်ရထားထိပ်တန်းပုံသဏ္ဍာန်၌ရှိကြ၏ (စကားမစပ်, ညဥ့်ရထားအားလုံးအတူတူပင်လမ်းကြောင်းရှိ တစ်နေ့ရထားလုပ်ပေးအဖြစ်), အများဆုံးအဆင့်မြင့်ကြိုတင်မှာယူမှုများလိုအပ်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေနေကြသည်ပါဘူး!
ဒါကြောင့်, မဆိုကြာကြာမစောင့်ဘူး: ထိုအဆင်းလှမြို့ကြီးများသို့သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ရထားလမ်းအားဖြင့်သြစတြီးယားနဲ့အီတလီရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ရန်:
သင့်ရဲ့သြစတြီးယား Start နဲ့ ရထားလမ်းအားဖြင့်အီတလီနိုင်ငံ ပထမဦးဆုံးဩစတြီးယားရဲ့ညားမြို့တော်ထွက်စစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှား. ဗီယင်နာ oozes သမိုင်း, တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း နှင့်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်အလှတရား!
နေ့ရက်ကာလ၌သြစတြီးယားရဲ့ပြတိုက်ဖွင့်စိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ Get, အစဉ်အလာဗီယင်နာကြိုးစားကြ ကော်ဖီ နှင့် Sachertorte သငျ့စိတျမှုတ်င့်! ဗီယင်နာပြည်နယ်အော်ပရာကဲ့သို့အဗီယင်နာရဲ့ All-အချိန်အကြိုက်ဆုံးထွက် Check နှင့် Schonbrunn နန်းတော် (သူတို့ကအကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေ-မြင်ကြသည်!). ရထားလမ်းကြောင်းပေါ် မူတည်. သင်ယူချင်, Graz ဆီသို့ဦးတည် Salzburg နှင့် Hallstatt ဖြောင့်သို့မဟုတ်ဦးခေါင်းကိုသွားဖြစ်စေ.
ဗီယင်နာ-Graz တိုက်ရိုက်ရထားလမ်းရှိပြီးကတည်းက, ဗီယင်နာကနေဗင်းနစ်ရန်သင့်လမ်းအပေါ် Graz နဲ့ Klagenfurt အတွက်ရပ်တန့်. အဆိုပါ Schlossberg သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲ Graz စွန့်ခွာမနေပါနဲ့. ဤသည်က၎င်း၏ကျော်ကြားနာရီမျှော်စင်လူသိများမြို့အလယ်တန်းနှင့်တစ်ဦးသည်ရဲတိုက်၌တစ်ဦးတောင်ကုန်းဖြစ်ပါသည်. သင်၌ရှိလျှင် ကောင်းသောပုံသဏ္.ာန်, လှေကားတက်ပါ Schlossbergplatz မှသို့မဟုတ်ရုံဓာတ်လှေကားကိုအသုံးပြုပါ. ရုံဘေးက Schlossbergplatz ဖို့သမိုင်းဝင် Kastner und Ohler ဖြစ်ပါသည် စျေးဝယ် စင်တာ - သူတို့ရဲ့ခေါင်မိုးကဖေးထွက်စစ်ဆေးပါ.
အဆိုပါရန်သင့်လမ်းတွင် ဘူတာရုံ, ဗဟို၏လမ်းများလမ်းလျှောက်ပါ အကောင်းဆုံးကိုရေခဲ-လိမ်းဆေး၏တဦးတည်း အစဉ်! “ရေခဲပြင် Geissler” Sporgasse အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအရသာအတွက်လာအော်ဂဲနစ်ရေခဲမုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စူပါအရသာဖြစ်ပါသည်! ရထားလမ်းခရီးစဉ်အားဖြင့်သင့်သြစတြီးယားနဲ့အီတလီဟာမိနစ်အားဖြင့်ဖွင့်ရှာဖွေနေသည်, မ?
Our next stop in Austria and Italy By Rail is Venice, သငျသညျအီတလီရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သငျသညျတယ်သောပြည်၌ရှိသောထဲသို့ဝင်င့်! ဗင်းနစ်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအတော်လေးစျေးကြီးသည်, သင်ရုံတစျနေ့အဘို့အတည်းခိုနေကြပါလျှင်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်. သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းသို့သော်ဤတိုတောင်းသောကာလ၌တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးမနေပါနဲ့. တစ်ဦးက ကောင်းကင်ကြိုးတပ်လှေခရီးစဉ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်! FYI, ဒါကြောင့်လည်းအလွန်စျေးကြီးသည်. အကြောင်းကိုဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ထား 80 30 မိနစ်ကြိုးတပ်ခရီးစဉ်များအတွက် EUR နှင့် ပတ်သက်. 120 တစ်ဘို့ EUR 45 တစ်မိနစ်တဦးတည်း. ထိုအခါ, ပိုတငျး di Rialto ထုတ်စစ်ဆေးသွားပါ - အရှိဆုံးတဦး ကျော်ကြားတံတားများ ဗင်းနစ်အတွက်. ဒါဟာရန်းတူးမြောင်းအထိချဲ့, ထိုသို့ပိုတငျး di Rialto နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်. ရထားဘူတာရုံရန်သင့်လမ်းတွင်, အဆိုပါ stunningly လှပသော Piazza San Marco အတွက်မြိန်ရေရှက်ရေ, ခေါ်စိန့်မာကု၏ရင်ပြင်.
ထိုအ Florence မှာရထားဖြင့်သင့်ရဲ့သြစတြီးယားနဲ့အီတလီကိုအဆုံးသတ်
သင့်ရဲ့သြစတြီးယားနဲ့အီတလီတွင်ရထားလမ်းခရီးစဉ်အားဖြင့်, သငျသညျဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ် Florence မှာရပ်တန့်. သမိုင်းနှင့်အတူထုပ်ပိုးဤမြို့၌တစ်ဦးကတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခု, အနုပညာနှင့်ဘာသာရေးအရေးပါမှုကိုစင်ကြယ်သောမှော်ဖြစ်ပါသည်. ကြည့်ဖို့ပထမဦးဆုံးအမှုအရာစန်တာမာရီယာ Novella ၏ Basilica နှင့် Cloisters များမှာ. သူတို့ကဘုန်းကြီးရထားဘူတာရုံအနီးမှာရှိပါတယ်! အဆင်းလှသော Piazza လက်တွေ့ကျကျအမြဲလူတွေနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုလည်းရှိပါတယ်. ထိုအခါ, အံ့ဖှယျစန်တာမာရီယာ del Fiore နှင့်၎င်း၏ကြီးမားသောအမိုးခုံးပေါ်ကိုရွှေ့. အဖြစ်ကောင်းစွာစန်တာ Croce နှင့် Basilica di စန်း Lorenzo နှင့် Medici Chapel ၏ Basilica ထုတ်စစ်ဆေး.
ခဏနားပါ ရထားခရီးစဉ်အားဖြင့်သြစတြီးယားနှင့်အီတလီမှ အဆိုပါစန်း Lorenzo Market ကမှဦးခေါင်း တစ်ဦးအမြန်အဘို့နှင့် အရသာမုန့်ညက်! ဤသည်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံတွေ '' အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ် စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ရေစာမှ! ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏နေ့လယ်စာခံစားချင်ပါတယ်ပြီးနောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအမှတ်တရပစ္စည်းဝယ်ဖို့? ဟုတ်ကဲ့! အဆိုပါ Uffizi သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲ Florence စွန့်ခွာမနေပါနဲ့, အဆိုပါ Accademia, အဆိုပါ Palazzo Vecchio, နှင့် Pitti နန်းတော်. ဤများမှာ အဓိကပြတိုက် မြို့ထဲမှာ. လည်း, အဆိုပါကပ်လျက် Boboli ဥယျာဉ်မှသွားရောက်ပေးဆောင်, သငျသညျအစဉျအမွဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်အလှဆုံးပန်းဥယျာဉ်.
သင်၏နောက်မှတ်တိုင်ရောမမြို့ဖြစ်ပါသည်. ကောင်းစွာ, သင်တို့သည်ငါတို့၏အီတလီနိုင်ငံစစ်ဆေးကြဘူးလျှင်သင်အဲဒီမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိ ... နှင့် Pinterest ပျဉ်ပြား.
Bologna Florence မှရထား
Livorno Florence မှရထား
Ravenna Florence မှရထား
ရထားလမ်းအတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်သြစတြီးယားနဲ့အီတလီများအတွက်, Login to တစ်ဦးကရထား Save အမြန်ဆုံးနှင့်သင့်ရထားလက်မှတ်တွေရဖို့အရှိဆုံးဘတ်ဂျက်-ဖော်ရွေလမ်းများအတွက်!
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cities-austria-italy-rail/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#travelaustria ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် travelaustria travelitaly
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား